Maxkamadda ICC oo maanta xukun ku rideysa Jean-Pierre Bemba | Baydhabo Online
Maxkamadda ICC oo maanta xukun ku rideysa Jean-Pierre Bemba
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Congo Jean-Pierre Bemba ayaa lagu wadaa maanta in ay xukun ku riddo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee ICC, kaddib markii ay maxkamaddu ku heshay dambi ah in uu laaluushay markhaatiyada maxkamaddaasi.
Bemba ayaa waxaa horey loogu xukumay 18 sano oo xabsi ah oo uu ku muteystay dambiyo dagaal iyo kuwo ka dhan ah aadanaha.
Sanadkii la soo dhaafay ayaa Bemba iyo afar qof oo kale oo isaga aad ugu dhawaa waxaa lagu helay dambi ah in ay laaluusheen markhaatiyada maxkamadda si ay u beeniyaan caddeymaha la hayo.
Dacwaddan ayaa ah tii ugu horreysay oo musuqmaasuq la xiriirta oo abid soo marta taariikhda maxkamaddani ICC.
Maxkamadda ayaa la hor keenay caddeymo muujinaya in Jean-Pierre Bemba uu gudaha xabsigiisa uu ka dhex abuuray shabakad isku xiran oo laaluushta dadka ku markhaati furayay isaga.
Shabakaddani ayaa isticmaalaysay taleefoono qarsoodi ah iyo ereyo maldahan, si ay u laaluushaan, una hagaan isla markaana ay faragelin ugu sameeyaan ugu yaraan 14 qof oo ah markhaatiyada ugu muhiimka maxkamadda ee isaga ku markhaati furayay.
Qareeenka u doodayay madaxweyne ku xigeenkaasi hore, nin madax ka ahaa difaaca dacwaddiisa, nin siyaasi ah oo ay saaxibbo yihiin iyo qof ka tirsan markhaatiyadiisa ayaa isu geyntooda lagu helay in ka badan boqol dambi.
Arrintan ayay ku muteysan karaan min shan sano oo xabsi ah, ganaax ama xitaa in la isugu daro labaduba.
Maxkamadda ICC-da ayaa rajeynaysa in dacwaddan ay farriin cad u noqoto dadka kale, taa oo ah in la ciqaabayo dadka isku daya in ay hor istaagaan caddaaladda.